Guriga, Kaniisadda Dunida ee Ilaah Switzerland (WKG)
KU SOO DHOW!
Waxaan ka mid nahay jidhka Masiixa waxaanan leenahay howl aan ku wacdinno injiilka, injiilka wanaagsan ee Ciise Masiix. Waa maxay warka wanaagsan? Ilaah wuxuu adduunka kula heshiiyey Ciise Masiix wuxuuna dadka oo dhan u fidiyaa cafiska dembiyada iyo nolosha weligeed ah. Dhimashadii iyo sarakiciddii Ciise ayaa innagu dhiirrigelinaysa inaan isaga u noolaano, inaan nafteenna u aaminno oo aan isaga raacno. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno inaad u noolaato sidii xerta Ciise, wax ka barato Ciise, raacdo tusaalahiisa oo aad ugu korto nimcada iyo aqoonta Masiixa. Maqaallada waxaan rabnaa inaan u gudbinno fahamka, jihaynta iyo ka caawinta adduunyada aan xasilloonayn ee lagu qaabeeyo qiyamka beenta ah. Ma markii ugu horreysay ee aad aqoon u leedahay Kaniisadda Dunida ee Dunida (Switzerland) xiriir? Waxaan rajeyneynaa inaan ku baranno!
Dalbo rukunka bilaashka ah annaga
magazine «FIIX CIISE»
dhacayaa Sabti, Nofeembar 28th 2020, saacaddu markay ahayd 14.00 p.m., ee Üdiker-Huus ee 8142 Uitikon.
Na soo qor haddii aad su'aalo qabto! Waxaan ku jirnaa kharashkaaga!
ILAAHAY GUJI MUUQAALKA HOPE DHAMMAAN
Yooxanaa, xerta Ciise, wuxuu sheegayaa sheeko xiiso leh oo dhacday bilowgii adeeggii Ciise ee dhulka. Ciise wuxuu ka caawiyay xaflad aroos ah ceeb weyn isagoo biyaha u rogay khamriga ugu tayada fiican. Waxaan jeclaan lahaa inaan tijaabiyo khamrigan waxaanan la jaan qaadayaa Martin Luther, oo yidhi: "Biirku waa shaqo dad, laakiin khamrigu wuxuu ka yimid xagga Eebbe". In kasta oo Kitaabka Quduuska ahi uusan waxba ka sheegin nooca khamriga ee uu Ciise maanka ku hayay markii uu biyaha u beddelay khamri xafladda arooska, haddana waxa laga yaabaa inay ahayd "Vitis vinifera," noocyo badan oo ka mid ah kuwa ugu badan ee canabka ah ee sameeya khamriga maanta ay ka yimaadaan macmalay…
Habeenkii Ciise la qabtay, Ciise wuxuu xertiisii ​​kala hadlay inay isaga baxaan, laakiin wuxuu u diray qalbi qaboojiye inuu u yimaado iyaga. «Way kuu wanaagsan tahay inaan tago. Sababta oo ah haddaanan tegin, qalbi qabugu kuuma yimaado. Laakiin haddaan tago waan kuu soo diri doonaa isaga (Yn 16,7). "Gargare" waa tarjumaadda ereyga Giriigga "Parakletos". Asal ahaan waa magaca qareen u istaagay kiis ama dacwad ka keenay maxkamadda. Qasiisiyahaani waa Ruuxa Quduuska ah ee loo ballanqaaday, kaasoo dunida ku yimid si buuxda oo cusub maalintii Bentakostiga ka dib ciidmadii Ciise ka dib. "Markuu yimaado, wuxuu noqon doonaa indhaha adduunka ...
Ma rabtaa inaad noqoto qof iimaan leh? Ma jeclaan lahayd aaminaad dhaqaajisa buuraha? Ma jeclaan lahayd inaad ka qaybqaadatid rumaysad soo noolayn kara kuwii dhintay, rumaysad la mid ah Daa'uud oo kale oo dili kara qof weyn? Waxaa laga yaabaa inay jiraan dad badan oo waaweyn oo noloshaada ka mid ah oo aad rabto inaad baabi'iso. Taasi waa kiiska Masiixiyiinta badankood, oo aan ku jiro. Ma rabtaa inaad noqoto Ruux weyn oo iimaan ah? Waad awoodaa, laakiin keligaa ma sameyn kartid! Marar badan, Masiixiyiinta akhriya cutubka 11-aad ee Cibraaniyada waxay u maleynayaan inay naftooda u tixgelin doonaan si aad u nasiib badan haddii ay u dhigmayaan mid ka mid ah dadkaas taariikhda kitaabiga ah. Ilaah sidoo kale noqon lahaa ...
MUQDISHO «GUJI» MUQAAL
Injiilku wuxuu macnihiisu yahay "war wanaagsan". Muddo sanado ah, injiilku war fiican umay ahayn sababtoo ah waxaa lay baray inta badan noloshayda in aan ku nool nahay maalmihii la soo dhaafay. Waxaan rumeysanahay in "dhamaadka adduunka" uu imaan doono dhowr sano, laakiin haddii aan u dhaqmo sida saxda ah, waan ka badbaadi doonaa dhibaatada weyn. Noocan aragtida adduunku waxay noqon kartaa mid qabatima, sidaa darteed waxaad u muuqataa inaad aragto waxkasta oo dunida ka socda iyadoo la marayo muraayadaha fasiraadda u gaarka ah dhacdooyinka dhici doona dhammaadka wakhtiga. Maanta qaabkan fakirka ahi ma aha diirada aan ku haystay caqiidadayda Masiixiyiinta iyo aasaaska ...
53 jirkan reer cagaaran ee Louis Washkansky wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay adduunka ee laabta qalbigiisa laabta ku nool. Waxaa saacado dhowr ah qalliin ku sameeyay Christiaan Barnard iyo kooxda 30-qalliin ee xoogga leh. Fiidnimadii 2-dii Diseembar, 1967, ayaa karraaniyaal 25-jir ah Denise Ann Darvall la keenay rugta caafimaadka. Waxay soo gaadhay dhaawacyo maskaxda ah oo dilaa ah kadib shil baabuur oo halis ah. Aabaheed wuxuu oggolaaday ku-deeqidda wadnaha waxaana la keenay Louis Washkansky qolka qalliinka si looga beddelo wadnaha ugu horreeya adduunka. Barnard iyo kooxdiisu waxay u aasteen xubin cusub. Kadib shoog koronto, wadnaha gabadha yar ayaa ku bilaabatay laabta ...
Mar labaad iyo mar labaad Bawlos wuxuu ku doodayaa Roomaan ahaan inaan ku leenahay Masiixa ilaahay inuu noo tixgaliyo sidii xaq. In kasta oo aan dembaabno mararka qaarkood, dembiyadaas waxaa lagu tiriyaa jirkii hore oo iskutallaabta lagula qodbay Masiixa. Dembiyadeennu kuma xisaabtamayaan waxa Masiixa ku jira. Waxaa waajib nagu ah inaan la dagaallano dembiga inaan la badbaadin, laakiin maxaa yeelay waxaan nahay carruurtii Ilaah. Qeybta ugu dambeysa ee cutubka 8, Bawlos wuxuu u jeestay mustaqbalkeena sharafta leh. Caalamka oo dhan ee lagu soo furtay nolosha Ciise Masiixi markasta ma sahlana. La dagaalanka dembiga waa daal. Cadaadiska joogtada ah wuxuu ka dhigayaa inuu noqdo Masiixi ...
MAALINTA MAALINTA CUSUB - QODOBKA CODKA NOLOSHA